Mother And Baby Blood Groups - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အမနေဲ့ ကလေး သှေးမတူဘူးလား?
သှေးအုပျစု ခှဲသော နညျးလမျးမြားစှာ ရှိပါသညျ။
M&N သညျဖွငျ့ ရှိသညျ့အထဲတှငျ အေ၊ဘီ၊ အဘေီ၊ အို စနဈသညျ အသံုးမြား၍ နားယဉျသော စနဈဖွဈပါသညျ
အမနေဲ့ ကလေး သှေးအမြိုးအစား မတူဘူး၊ အမကေ အေ၊ ကလေးက အဘေီ ဖွဈနိုငျပါသညျ။
အဖကေ ဘီဖွဈလို့ နမှောပေါ့ ဒါကမဆနျးပါ
ဆနျးသညျက အခုပွောမယျ့ Rh
အပေါငျးသှေး အနုတျသှေး ချေါကွသညျ
အကယျ၍ ကြှနျုပျတို့ သှေးထဲတှငျ သှေးနီဥပျေါ၌ Rhအမှတျအသား ပါနပေါက အပေါငျးသှေး
အပေါငျးသှေး သမားမြားသညျ သှေးနီဥပျေါတှငျ အမှတျအသားပါသညျ
အနုတျသှေးသမားမြားကား မပါသဖွငျ့ အကယျ၍ သူတို့သှေးမဟုတျပဲ ဝငျလာလြှငျ တိုကျနိုငျရနျ အပေါငျးသှေးကို ဖကျြသော ပဋိပစ်စညျးမြား ရှိနတေတျသညျ
ပွဿနာက အဲဒီက စတာပါ
အကယျ၍ အမကေ အပေါငျးသှေး၊ ကလေးက အနုတျသှေး
ကလေးမှေးစဉျ အမရေဲ့ အပေါငျးသှေးက ကလေးရဲ့ အနုတျထဲ ဝငျဦးတော့ တိုကျစရာ ပဋိပစ်စညျး မရှိသေးတာမြားသညျ
မိခငျဆီက အပေါငျးဆနျ့ကငျြ ပဋိပစ်စညျးတှေ ကလေးဆီရောကျသှားပွီး ကံမကောငျးအကွောငျးမလှလြှငျ ဝမျးမမကြှတျခငျ သဆေုံးတတျပါသညျ
ဒါကွောငျ့ ကိုယျဝနျအပျလြှငျ သှေးအုပျစု သခြောပွနျစဈပါ
သငျ အနုတျသှေး ဖွဈနပေါက သငျ့ကလေးအတှကျ လိုအပျသညျမြားကို ဆရာဝနျနှငျ့ တိုငျပငျထားသငျ့ပသေညျ။
အမေနဲ့ ကလေး သွေးမတူဘူးလား?
သွေးအုပ်စု ခွဲသော နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။
M&N သည်ဖြင့် ရှိသည့်အထဲတွင် အေ၊ဘီ၊ အေဘီ၊ အို စနစ်သည် အသံုးများ၍ နားယဉ်သော စနစ်ဖြစ်ပါသည်
အမေနဲ့ ကလေး သွေးအမျိုးအစား မတူဘူး၊ အမေက အေ၊ ကလေးက အေဘီ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အဖေက ဘီဖြစ်လို့ နေမှာပေါ့ ဒါကမဆန်းပါ
ဆန်းသည်က အခုပြောမယ့် Rh
အပေါင်းသွေး အနုတ်သွေး ခေါ်ကြသည်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ သွေးထဲတွင် သွေးနီဥပေါ်၌ Rhအမှတ်အသား ပါနေပါက အပေါင်းသွေး
အပေါင်းသွေး သမားများသည် သွေးနီဥပေါ်တွင် အမှတ်အသားပါသည်
အနုတ်သွေးသမားများကား မပါသဖြင့် အကယ်၍ သူတို့သွေးမဟုတ်ပဲ ဝင်လာလျှင် တိုက်နိုင်ရန် အပေါင်းသွေးကို ဖျက်သော ပဋိပစ္စည်းများ ရှိနေတတ်သည်
ပြဿနာက အဲဒီက စတာပါ
အကယ်၍ အမေက အပေါင်းသွေး၊ ကလေးက အနုတ်သွေး
ကလေးမွေးစဉ် အမေရဲ့ အပေါင်းသွေးက ကလေးရဲ့ အနုတ်ထဲ ဝင်ဦးတော့ တိုက်စရာ ပဋိပစ္စည်း မရှိသေးတာများသည်
မိခင်ဆီက အပေါင်းဆန့်ကျင် ပဋိပစ္စည်းတွေ ကလေးဆီရောက်သွားပြီး ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလျှင် ဝမ်းမမကျွတ်ခင် သေဆုံးတတ်ပါသည်
ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်အပ်လျှင် သွေးအုပ်စု သေချာပြန်စစ်ပါ
သင် အနုတ်သွေး ဖြစ်နေပါက သင့်ကလေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ထားသင့်ပေသည်။